ဇရပ်: ခေတ်နဲ့ ပိုက်ဆံ
ပိုက်ဆံ…. ကျွန်တော် ငယ်ငယ်က ပိုက်ဆံအရမ်းမက်တယ် . . မေမေက မုန့်ဖိုးပေးရင်တောင် ကိုယ့်မုန့်ဖိုးတောင် မကြည့်ဘူး မေမေ့ ပိုက်ဆံအိပ်လေး လှမ်းကြည့်ပြီး ထပ်များပေးမလားလို့ မျှော်ရတာ အမော၊ အဖေက မုန့်ဖိုးပေးရင်လည်း မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ သနားပြီး ပိုပေးအောင် နေပြတာ အမော . . ဟဲဟဲ ကိုယ့်ဂုဏ်နည်းနည်းဖော်မယ်နော် . .အဲလောက် ပိုက်ဆံမက်တာ ခင်ဗျ…
နောက် (၈)တန်း အရွယ်လောက်မှာ စီးပွားရေးကို စစဉ်းစားလာတယ်။ မေမေ အမွေဘယ်လောက်ပေးမှာလဲပေါ့။ ပေးရင် သားကို ခု နည်းနည်းလေး ချေးထားပါလား နောက်မှ ပြန်ဖြတ်ပေါ့ဗျာဆိုပြီး တောင်းတတ်လာတယ်။ ထားလိုက်ပါတော့ ကျွန်တော် ပိုက်ဆံသိပ်မက်တယ်ပေါ့ဗျာ။
ခု အသက်ရလာတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်ရဲ့ အမြင်တွေ ပြောင်းလဲလာတယ်။ ပိုက်ဆံဆိုတာ လူတစ်ယောက်မှာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့အရာကြီးတစ်ခု မဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲ။ ပိုက်ဆံဆိုတာ
လိုချင်တာကို ၀ယ်ဖို့ လွယ်ကူအောင် လုပ်ပေးတဲ့ အရာတစ်ခု အနေနဲ့ပဲ သဘောထားတော့တယ်။
လူဆိုတာ ကိုယ်ဝါသနာပါရာအလုပ်တွေနဲ့ ကိုယ့်ဗဟုသုတတွေကို ရှာမှီးနေဖို့ပဲလိုတယ် ပိုက်ဆံဆိုတာနောက်ကို လိုက်ဖို့ မလိုဘူးလို့ဘဲထင်တယ်။ ပိုက်ဆံမရှာရဘူးလို့ ပြောတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ ရှာတော့ ရှာရမယ် သိပ်ပြီးနစ်မြုပ်ဝင်သွားအောင်တော့ မလုပ်သင့်ဘူး။ ပိုက်ဆံ ကိုယ့်နောက်လိုက်အောင်ပဲ ကြိုးစားရမယ်။
ပိုက်ဆံက အရာရာတိုင်းကို ဖန်တီးနိုင်တယ်လို့ လူတော်တော်များများက ပြောကြတယ်။ ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။ အတိုင်းအတာတစ်ခု အထိ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့ဘ၀မှာ ရင်ဆိုင်နေရတယ့် စိတ်ခံစားမှုတွေ ယုံကြည်မှုတွေ အနာဂတ်တွေကိုတော့ ပိုက်ဆံနဲ့ ပြောင်းလဲအောင် မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ လုပ်နိုင်တယ်လို့ ထင်မြင် ယူဆတဲ့သူတွေကိုလည်း လုပ်ကြည့်ပါလို့ ပြောချင်တယ်။
ခုနောက်ပိုင်းမှာ လူတော်တော်များများဟာ ပိုက်ဆံနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ကိုယ်ကျင့်တရားတွေ ပျက်ပြားကုန်ကြတယ်။ ယောက်ျားတွေကလည်း ပိုက်ဆံရှိလို့ ပျက်စီးသလို၊ မိန်းမတွေကလည်း ပိုက်ဆံမက်လို့ ပျက်စီးကြရတယ်။ ပိုက်ဆံမက်လိုိ့ ဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေလည်း ဒုနဲ့ ဒေးပါဘဲ။ ခေတ်ကလည်း ပစ္စည်းဆန်းဆန်းတွေကို ငွေပုံပေး ၀ယ်ယူတဲ့ခေတ်ကိုး။ အမှန်တော့ ဒါတွေဟာ
မဖြစ်သင့် မဖြစ်ထိုက်တာတွေပါ။ တလောက သတင်းတစ်ပုဒ် ဖတ်လိုက်ရတယ် တရုတ်ပြည်က မိန်းမပျိုလေးတစ်ယောက် iphone လေး ကိုင်ခွင့်သာ ရမယ်ဆို၊ ၀ယ်ပေးမယ့် သူကို သူရဲ့ အပျိုစင် ဘ၀ပေးမယ်လို့ ကြေငြာသတဲ့ဗျာ။ ဒါ လုံးဝ မဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စပါ။ ပစ္စည်းဆိုတာ သင်္ခါရပါ။ တစ်နှစ်တစ်မျိုး အမျိုးမျိုး အသစ်အဆန်းတွေ ထွက်နေတာပါ။ ဒီလိုမျိုးသာ ဖြစ်နေရင် ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ။ ပစ္စည်းဆိုတာ ကိုယ်နဲ့ အသုံးတည့်မှ တန်ဖိုးဆိုတာရှိပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ အသုံးမတည့်ပဲ ၀ယ်ထားတဲ့ ပစ္စည်း ဘယ်လောက် ပိုက်ဆံပေးပီး ၀ယ်တယ်ပြောပြော။ တန်ဖိုး မရှိပါဘူး။
ခုလို သက်မဲ့တစ်ခုအပေါ်မှာတောင် ဒီလို လောဘတွေ တက်မက်စိတ်တွေ ဖြစ်နေရင် နောင်အနာဂတ်မှာ လူတွေ ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ။ ခေတ်ဆိုတာ အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတာပါ။ ခု အခြေအနေက ဆုတ်ခေတ်ဘက်ကို ရောက်နေတာပါ။ ပစ္စည်းတွေ ဘယ်လောက် ခေတ်မီတယ်ပြောပြော အဆိုးဘက်က ကြည့်ရင် ဆိုးကျိုးတွေ အများကြီးပါ။
တရားသဘောနဲ့ ချိန်ထိုးကြည့်ရင် အနိစ္စ မတည်မြဲခြင်းသဘောကြောင့် ဘယ်အရာဝတ္ထုမှ တည်မြဲခြင်း သဘောကို မဆောင်ပါဘူး။ အကောင်းချည်းပဲဆိုတာ မရှိသလို၊ အဆိုးချည်းပဲဆိုတာ မရှိပါဘူး။ အကောင်းနဲ့ အဆိုး ဒွန်တွဲနေတာမို့ တစ်ခုကောင်းနေရင် တစ်ခု ဆိုးနေမှာပါ။ ဥပမာ-ပိုက်ဆံချမ်းသာရင် ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့မယ်ပေါ့၊ ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုခု စိတ်ညစ်စရာတော့ ရှိမှာပါ။
အမည်နာမ်စားတွေ မခွဲပဲ လူဆိုတဲ့ လူတွေအားလုံးဟာ ဒီမြေကြီးပေါ်မှာ နှစ်ခေါင်းပေါက်နဲ့ အသက်ရှုကြတဲ့ လူတွေအားလုံးတူတူကြီးပါပဲ။ စိတ်ညစ်စရာတွေ ပျော်စရာတွေအားလုံး ထပ်တူ ခံစားဖူးတဲ့ သူတွေ ရှိသလို၊ ဆင်တူ ခံစားဖူးတဲ့ သူတွေ ရှိမှာပါဘဲ။ ဒါကြောင့် ငါသည်သာ အဆင်းရဲဆုံး ၊ ဒုက္ခအများဆုံး ဆိုပီး ကိုယ့်အတ္တကို ရှေ့တန်းမတင်ပါနဲ့။ လုပ်စရာရှိတာ လုပ်ပါ။ သင်စရာရှိတာ သင်ယူပါ။
ခေတ်နဲ့ စနစ်၊ လိုအပ်ချက်တွေကို သေသေချာချာ ခွဲခြားပါ။
ပိုက်ဆံဆိုတဲ့ အမြင်အပေါ်မှာလဲ အားလုံး ပြောင်းလဲ ပစ်ဖို့ လိုပီ ထင်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံဆိုတာ အရောင်မျိုးစုံ နှိပ်ထားတဲ့ လိုချင်တာကို လဲလှယ်ယူရတဲ့ ဖြတ်ပိုင်းစုတ်တစ်ခုပါပဲ။ အဲ့ဒီ စာရွတ်စုတ်တွေရဖို့အတွက် သွေးတွေ၊ ချွေးတွေ၊ အကျင့်သိက္ခာတွေ၊ မတရားမှုတွေ ကျူးလွန်ရတာ တန်ရဲ့လား???
Posted by phyosuhan at 7/18/2011 01:36:00 pm
Cmd ကနေ ဆိုဒ်တွေကို Block မယ်
Hacker တစ်ယောက် ဖြစ်ချင်ပါသလား??